कुन हेर्ने ‘रोमियो एण्ड मुना’ कि ‘चिमुसी चि’ ? « Ramailo छ
कुन हेर्ने ‘रोमियो एण्ड मुना’ कि ‘चिमुसी चि’ ?
समय : 8:28 am
यो शुक्रबार तीन नेपाल फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका छन् । रोमिया एण्ड मुना र चिमुसी चि प्रचार सहित प्रदर्शनमा आएका हुन् भने सुकुलगुण्डा सुटुक्क हलमा आएको हो । साउन ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएका तीन नेपाली फिल्महरु मध्ये रोमियो एण्ड मुना र चिमुसी चि बारे छोटो चर्चा गरौं ।
‘रोमियो एण्ड मुना’
फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’ लाई नरेश कुमार केसीले निर्देशन गरेका हुन् । जहाँ नायक विनय श्रेष्ठ र नायिका सृष्टि श्रेष्ठले शिर्ष भूमिका निभाएका छन् । निर्देशक केसीकै पटकथा एंव संवाद रहेको फिल्ममा रोमियो र मुनाबिचको द्धन्द्ध र प्रेमलाई महसुश गर्ने सकिनेछ । फिल्म निर्माणमा प्रशन्न गोपाली, रोजी श्रेष्ठ, राम शर्मा र कविन शाक्यले सहकार्य गरेका छन् । विनय र सृष्टि श्रेष्ठसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
दिनेश श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘चिमुसी चि’ मा नव कलाकार सुनिल क्षेत्री र अलिशा शर्माको मुख्य भूमिका छ । साथमा सुशान्त कार्की, कमली वाइबा, सशांक बस्याल, शेखर सुवेदी र शिवराम कार्की लगायत कलाकारले फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा शिवराम कार्की कार्यकारी निर्माता, अरुण गुरुंग, महेश्वर खत्री, सुवास भुर्तेल, डव बहादुर गुरुंग निर्माताको रुपमा छन् । फिल्मको कथा एंव पटकथा लेखेका निर्देशक श्रेष्ठले चिमुसी चि को कथा भने सस्पेन्स राखेका छन् । फिल्मको यो गीत हेर्नुस् :